Nkọwapụta |lọ ọrụ | Shijiazhuang Yungong Machinery Technology Co., Ltd.
The ụlọ ọrụ na-tumadi aku nkenke mgbatị na nri ígwè n'ichepụta. Investment mgbatị usoro bụ sịlịkọn Sol, na-enwe kwa afọ mmepụta nke banyere 3000 tọn oge ọgbụgba. Ihe ndi ahu bu ihe ndi di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche mee ihe. A na-eji ngwaahịa eme ihe na Valves nfuli impellers ọkpọkọ oyiyi akwa, akụrụngwa akụkụ, nri igwe, ịnweta ígwè ngwa, ngwaike ngwá ọrụ ngwaahịa na ọla mma.
Nkenke ulo oru mbo igba ngwaahịa mara maka ha magburu onwe ya mma na ntụkwasị obi na ngwa ọ bụla ha na-zubere maka. Usoro anyị nwere ike ịmepụta ihe dị mgbagwoju anya na ihe ndozi na ịdị mfe.
Nkenye ego mgbatị nwere ọtụtụ uru, na nsonye: Finely zuru ezu akụrụngwa mmepụta / Mbelata nke mmepụta ụgwọ / Machining na nzukọ chọrọ / Ojiji nke alloys di otutu.
A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Europe, America na mba dị iche iche.
Anyị ụlọ ọrụ nwere nke oge a ọkọlọtọ osisi, na ike oru ike, enwekwa technology, elu nkenke mgbatị nhazi na ule akụrụngwa. Na afọ nke mbupụ trading ahụmahụ, na-enye gị zuru okè mgbe-sales ọrụ, ugbu na-enye ndị ahịa na mbụ na klas na ngwaahịa.
Anyị nwere ike ịnye nnukwu ma ọ bụ obere (site na 5g ruo 30kg kwa ibe) na nhọrọ nkedo dị mgbagwoju anya. Anyị ọkachamara otu na-arụpụta gbakwunyere nka iji hụ na anyị nkenke mgbatị ngwọta na-ezute gị anya.
Gịnị Mere Anyị Ji Họrọ Anyị?
• Professional otu-enyere gị optimizing dum ngwọta si ngwaahịa imewe, mgbatị, machining ka okpomọkụ ọgwụgwọ, n'elu ọgwụgwọ, na na na belata gị na-eri.
• Abù atule na usoro ọ bụla, na 100% ikpeazụ atule.
• Na-ebute nnyefe ụzọ maka ndị ahịa si mba ọzọ.
• were were na nkwukọrịta Bekee na ọdụ ụgbọ elu na-eburu ọrụ.
Ogo: Ibu ebube
Eziokwu: Uru ọ bara
Innovation: Mkpụrụ obi ụlọ ọrụ